Ingabe inkampani noma inkampani yokuhweba?
UJingye kuyinto nomkhiqizi professional. Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu.
Yini imigomo yakho ukupakisha?
Ngokuvamile, umshini uzolungiswa ngabakaki, bese-ke ukupakishaed esimweni se-plywood.
Yini imigomo yakho yokulethwa?
I-EXW, i-FOB, i-CIF, i-DDU.
Kuthiwani ngesikhathi sakho sokulethwa?
Ngokuvamile, kuzothatha amasonto amathathu kuye kwayi-4 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho kusengaphambili. Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni nobuningi be-oda lakho.
Yini imigomo yakho yokukhokha?
T / T kusengaphambili, 50% njengediphozi, bese uqeda 5Inkokhelo engu-0% esele ngaphambi kokulethwa.
Sizokukhombisa izithombe zemikhiqizo namaphakeji ngaphambi kokukhokha ibhalansi.
Ingabe ukuhlola zonke izimpahla zakho ngaphambi kokubeletha?
Yebo, sinokuhlolwa okungu-100% ngaphambi kokubeletha
Yenza kanjani ifektri yakho maqondana nokulawulwa kwekhwalithi?
Ikhwalithi iza kuqala. Sihlala sinamathisela ukubaluleka okukhulu ekulawulweni kwekhwalithi kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kokukhiqizwa. Yonke imikhiqizo izohlanganiswa ngokugcwele futhi ihlolwe ngokucophelela ngaphambi kokuthi iqoqelwe ukuthunyelwa.
Kuyoze kube nini iwaranti?
Iwaranti yonyaka owodwa.
Singaba ngabasabalalisi bakho ezweni lethu?
Yebo, siyakwemukela kakhulu! Imininingwane eminingi izodingidwa uma unentshisekelo yokuba umenzeli wethu.
Kuthiwani ngesevisi yokuthengisa ngemuva?
Ukusekelwa okusheshayo ngemuva kokuthengisa. Imikhiqizo yethu inewaranti yonyaka owodwa kanye nezinsizakalo zamahhala zokubonisana unomphela.